Amosi 4 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
4 “Liveni eli lizwi, nina zimazi zeenkomo zaseBhashan,+ ezisentabeni yaseSamariya,+ eziqhatha izisweli,+ ezityumza amahlwempu, ezithi kwiinkosi zazo, ‘Zisani, sisele!’ 2 INkosi enguMongami uYehova ifunge ubungcwele bayo yathi,+ ‘“Khangelani! Nizelwa yimihla, yaye ngokuqinisekileyo uya kuniphakamisa ngamagwegwe omxheli nenxalenye yokugqibela yenu ngamagwegwe okuloba iintlanzi.+ 3 Niya kuphuma ngeentanda,+ ngamnye aye ngqo phambili; kwaye ngokuqinisekileyo niya kuphoswa eHarmon,” utsho uYehova.’ 4 “‘Yizani eBheteli nize ninxaxhe.+ EGiligali nxaxhani ngokufuthi,+ nize nizise imibingelelo yenu kusasa; ngomhla wesithathu, izishumi zenu.+ 5 Niqhumisele umbingelelo wemibulelo ngento enegwele,+ nibhengeze iminikelo yokuzithandela;+ kuvakaliseni oku, kuba leyo yindlela enithanda ngayo, nina nyana bakaSirayeli,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 6 “‘Mna ndaninika ukucoceka kwamazinyo+ kuzo zonke izixeko zenu nokuswela isonka kuzo zonke iindawo zenu;+ kodwa anibuyelanga kum,’+ utsho uYehova. 7 “‘Mna ke, ndayithintela imvula kuni kuseziinyanga ezintathu ukuba kuvunwe;+ yaye ndayinisa kwesinye isixeko, kodwa kwesinye isixeko andayinisa. Esinye isiqwenga somhlaba sanelwa yimvula, kodwa kwesinye isiqwenga somhlaba endingayinisanga kuso kwakomile.+ 8 Izixeko ezibini okanye ezithathu zibhadulele sixekweni sinye ukuze zisele amanzi,+ yaye zazinganeli; kodwa anibuyelanga kum,’+ utsho uYehova. 9 “‘Ndanibetha ngembalela nesihumba.+ Imiyezo yenu nezidiliya zenu zanda, kodwa imikhiwane yenu neminquma yenu yadliwa ngumbungu;+ ukanti anibuyelanga kum,’+ utsho uYehova. 10 “‘Ndathumela phakathi kwenu indyikitya yokufa ngokohlobo lwaleyo yaseYiputa.+ Ndabulala abafana benu ngekrele,+ ndathimba namahashe enu.+ Ndamana ndisenza ukuba ukunuka kakubi kweenkampu zenu kunyukele nasemathatheni enu;+ kodwa anibuyelanga kum,’+ utsho uYehova. 11 “‘Ndanibhukuqa, njengokubhukuqa kukaThixo iSodom neGomora.+ Yaye naba njengesikhuni esixhwilwe emlilweni;+ kodwa anibuyelanga kum,’+ utsho uYehova. 12 “Ngoko ke naku endiya kukwenza kuwe, Sirayeli. Ngenxa yokuba ndiya kwenza kanye le nto kuwe, zilungiselele ukuhlangana noThixo wakho,+ Sirayeli. 13 Kuba, khangela! uMyili weentaba+ noMdali womoya,+ Lowo uxelela umntu wasemhlabeni oko akuxhalabeleyo engqondweni yakhe,+ Lowo wenza isifingo sibe bubumnyama,+ Lowo unyathela kwiindawo eziphakamileyo zomhlaba,+ nguYehova uTHIXO wemikhosi igama lakhe.”+